PressReader - Isolezwe: 2018-07-16 - Iningi lizophuthelwa ekaMandela ngenxa ye-data
Iningi lizophuthelwa ekaMandela ngenxa ye-data
Isolezwe - 2018-07-16 - IMIBONO -
NGESONTO eledlule kuqinisekiswe uhlu lwabaculi bendumezulu yekhonsathi ezoba seGoli yokugubha iminyaka engu-100 kwazalwa uMengameli Nelson Mandela ongasekho emhlabeni.
I-Global Citizen Festival ihlelwa yinhlangano ezibophezele ekuqedeni ububha emhlabeni, iGlobal Citizen, ikomkhulu layo eliseNew York, eMelika.
Phakathi kwabaculi abazonandisa kukhona uCassper Nyovest, Femi Kuti, Beyonce, Pharrell Williams, Usher nabanye. Kunezinye izihlabani ezizoseka lo mgubho ezinjengoNaomi Campbell, Tyler Perry no-Oprah Winfrey.
Iningi lamathikithi ale khonsathi azotholakala mahhala. Kodwa imigomo nemibandela ithi kufanele abantu babhalise besebenzisa i-internet bese kuba khona imigudu abayilandelayo abazobe betshelwa yona uma sebebhalisile.
Le migudu noma imisebenzi okuzodingeka abantu bayenze uma sebebhalisile izohambisana nokulwa nobubha.
Uma umuntu eseyenzile leyo misebenzi ethize, kukhona amaphuzu abazowathola. Uma ungomunye wabathole amaphuzu anele, igama lakho lizofakwa ohlwini lwabantu okuzotonyulwa kubo abawine amathikithi kanti lokhu kuzokwenziwa njalo emuva kwamasonto amabili.
Izinhloso zeGlobal Citizen ziyancomeka njengoba injongo enkulu kungukuthi wonke umuntu afake isandla ekulweni nobubha.
Kodwa lokhu kokuthi bangabe besabheka uma beletha ikhonsathi e-Afrika ukuthi izinto ezifana ne-data zisabiza kanjani njengoba yonke into yenziwa nge-internet kuyinkinga.
Lena yokuwinisa amathikithi nge-internet bebengayenza kodwa futhi bebengabheka nanezinye izindlela ezizokwenza kungagcini sekuyidlanzana elisethubeni lokuwina amathikithi ngoba i-data iyabiza.
Siyakuqonda ukuthi inhloso wukukhuthaza abantu ukuthi balekelele ekulweni nobubha kodwa futhi bebengabheka nanokuthi baphe amathikithi abanye babantu abanezinhlangano ezivele zenza lo msebenzi mihla namalanga bengabheke nzuzo.
Bebengasebenzisana ngisho nemisakazo namaphephandaba ukufinyelela nakwabanye abantu ngoba iqiniso lithi i-internet ayikafinyeleli kuwona wonke umuntu eNingizimu Afrika ngenxa yakho ububha.